काठमाडौं उपत्यका छाडेर घर जाने यात्रु भन्दा उपत्यका भित्रिने यात्रु धेरै – News Online
काठमाडौं उपत्यका छाडेर घर जाने यात्रु भन्दा उपत्यका भित्रिने यात्रु धेरै
Bhaktapur: Nepalese people arrive to boardavehicle to go back to their village, during lockdown to prevent the spread of the new coronavirus in Bhaktapur, near Kathmandu, Nepal, Tuesday, April 21, 2020. Thousands of villagers who have been stranded in Kathmandu for weeks since Nepal's government imposed lockdown to stop spread of coronavirus boarded convoys of buses heading east of the capital Tuesday. AP/PTI (AP21-04-2020_000242B)
काठमाडौं । यस वर्ष दशैं मनाउन काठमाडौं उपत्यका छाडेर घर जाने यात्रु घटेका छन् । दशैं नजिकिए पनि उपत्यका छाड्नेभन्दा भित्रिने यात्रुको संख्या बढी देखिएको छ । मानिसमा कोभिड महामारीको त्रास अझै रहेको र चाडपर्वको उत्साह पनि घटेकाले दशैं मनाउन घर जाने यात्रुको संख्यामा कमी आएको बताइएको छ ।
सरकारले असोज ११ गतेदेखि लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारीसाधनमा २८ प्रतिशत भाडा बढाएर अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिसकेको छ । यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले असोज १ देखि ११ गतेसम्म उपत्यका छाडेर जाने यात्रु ३ लाख हाराहारीमा मात्र रहेको बताए । उनका अनुसार अहिले पनि उपत्यका भित्रिने भन्दा बाहिरिने यात्रु कम छन् । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।
Published October 3, 2021 By टक नेपाल संवाददाता
साहस उर्जाको आईपीओ बाँडफाँडः१७ लाख ३९ हजारको हात खाली,तपाईलाई पर्यो कि परेन,यी ३ तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ नतिजा?
गायक तेज थिङ्गको “आखेले भन्छ हेर नाती”सार्वजनिक (भिडियो सहित)